Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Omaniana midina an-tsehatra hiadiana amin’ny gripan-kisoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Bilaogera Omaniana midina an-tsehatra hiadiana amin'ny gripan-kisoa
Voadika ny 15 Jona 2018 3:51 GMT 1	 · Mpanoratra Riyadh Al Balushi Nandika Miranah
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Oman, Fahasalamàna, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny septambra 2009)
Nanomboka ny fanentanan'izy ireo momba ny gripan-kisoa ireo bilaogera Omaniana omaly tamin'ny alalan'ny fanavatsavana ny Souq Matrah mba hampiely hafatra sy hampianatra ny vahoaka. Hamed Al Ghaithi no niavian'ny hevitra voalohany momba ny fanentanana, ary avy eo nentina tamin'ny dingana manaraka tamin'ny ezaka fiarahamiasa teo amin'i Bader Al Hinai , Ammar Al Mamari , Waleed Al Nabhani , Hashr Al Manthari , ary Muawiyah Al Rawahi  izany. Nizara fitaovana mpamono otrikaretina ho an'ireo trano fisakafoanana sy fivarotana kafe ireo bilaogera ireo ary nanoro-lalana ny mpiasan'izy ireo mikasika ny fomba tsara hanadiovana ny latabatra rehefa lasa ny mpanjifa. Nandray tsara ny toro-hevitra ireo trano fisakafoanana sy ny fivarotana kafe ary toa nandray izany tamim-pahamendrehana, mety ho nihevitra angamba ny sasany tamin'izy ireo fa delegasiona ofisialy avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana ireo bilaogera ireo.
Nifindra tany amin'ireo mpamily fiarakaretsaka avy eo ireo bilaogera mba hampahafantatra azy ireo ny tombontsoa amin'ny fampiasana mpamono otrikaretina, alikaola fanadiovana tanana sy ny fanaovana sarontava mba hampihenana ny fifindran'ny aretina. Tsy nahafantatra akory momba izany mpamono otrikaretina izany ny ankamaroan'ny mpamily fiarakaretsaka ary nihevitra fa lasopy izany izay mila fampiasana rano hanasàna azy.
Ny fizotry ny fandaharana farany dia ny fandehanana manodidina ny Souq [tsena] mba hampahafantatra ireo mpitsidika momba ny tombontsoa amin'ny fampiasana ny mpamono otrikaretina amin'ny fampiasana alikaola hanadiovana tanana.
Bilaogera Muawiyah nanoratra lahatsoratra lavalava miaraka amin'ny sary momba ny fandehan'ny hetsika sy ny fanehoan-kevitra samihafa azon'izy ireo tamin'ireo mpitsidika ny souq.
Heverina hokarakaraina mandritra ny fanapahana ny Eid ny hetsika iray hafa amin'ny fanentanana amin'ny ady amin'ny gripan-kisoa, saingy tsy mbola hita ao amin'ny aterineto ny antsipiriany momba izany hetsika izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/15/121235/
 Bader Al Hinai: http://baderhinai.blogspot.com/
 Waleed Al Nabhani: http://sarnamat.blogspot.com/
 Hashr Al Manthari: http://7shr.blogspot.com/
 Muawiyah Al Rawahi: http://www.almuhathwin.com/
 lahatsoratra lavalava miaraka amin'ny sary : http://www.almuhathwin.com/2009/09/blog-post_20.html